အဖီးတစ်ရာငှက်ပျောနဲ့ ဘဲမလွတ်အုန်းပင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အဖီးတစ်ရာငှက်ပျောနဲ့ ဘဲမလွတ်အုန်းပင်
Posted by kyawmonkhant on Mar 4, 2012 in Copy/Paste, News | 25 comments
တောင်သူလယ်သမားနေ့ပိတ်ရက်မှာ ဇွတ်ရော အတင်းရော လိုက်ခဲ့ဖို့ အခေါ်ခံရလို့ သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါ။ အစက အဲဒီနေရာကို သွားဖို့ အစီအစဉ် ထဲမှာ မပါဘူး။ တယောက်က အကြံပြုလိုက်တာနဲ့ ရောက်ဖြစ်သွားတာ။ နေရာကတော့ စိမ်းလဲ့တင် ဟိုတယ်ရီဆော့ပါ။ ရန်ကုန် မော်လမြိုင် လမ်းမပေါ် ရန်ကုန်ကသွားရင်ကျိုက်ထိုမရောက်ခင် လမ်းမကြီးရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးမှာပါ။ ကားနားရင်း ထမင်းစားလို့ရတယ်။ ရေကူးလို့ရတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ရုံငယ်လေး ရှိတယ်။ ပျိုးပင်တွေရောင်းတယ်။ လူတိုင်းဝင်ကြည့်လို့ ရတဲ့နေရာလေးပါ။ အပေါ့အပါးသွားချင်ရင်လဲ သန့်ရှင်းတဲ့ အိမ်သာရှိပါတယ်။ တခေါက်တော့ ရောက်ဖူးပေမယ့် ခုလိုကြာကြာမနေခဲ့ဘူး။ ဒီတခါတော့ သုံးနာရီလောက်ကြာအောင်နေခဲ့တာဆိုတော့ လှည်ပတ်ကြည့်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့
(မနေ့ညနေကထမတခါတင်တာ၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတော့၊ အားလုံးလုပ်ပြီးသား၊ အကုန်ပျက်သွားတယ်၊ ၄-နာရီလောက်အချိန်ပေးလိုက်ရတယ်၊ ဒီမနက်အစအဆုံးပြန်ရေး/ပြန်တင်ရတယ်၊ ကော်နက်ရှင်က မနက်ပိုင်းဆို သိပ်မဆိုးလို့တော်သေးတယ်၊ ဒါတောင် ၁-နာရီလောက်တော့ကြာတာဘဲ)
(၁) အဖီးတစ်ရာ ငှက်ပျောပင်
(၄) စိုက်ချင်သူများ အပင်ပေါက်ဝယ်လို့ရတယ်
(၅) ဒါက ဘဲမလွတ်တဲ့ အုန်းပင်လေး (ဘဲလေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင်)။ ဘဲလေးတွေလဲ အုန်းပင်လေးနားမှာ အစာစားနေတာဆိုတော့ ဘဲမလွတ်လို့ ခေါင်းစဉ်တင်လိုက်တာ။
(၆) အုန်းပင်လေး တပင်လုံးမြင်ရအောင်
( ၇) ဒါကတော့ အုန်းလေးရဲ့နာမည်နဲ့ ဒေတာတွေ
( ၈) ပျိုးပင်လည်းရောင်းပါတယ်။
(၉) နာနတ်ပင်လေးပါ အသီးလေးတွေသီးနေတယ်
(၁၂) တိရစ္ဆာန်ရုံလေးထဲက သမင်လေး
(၁၄) ရေကူးကန်ဘေးက မီးအိမ်လေး
( ၁၅) ဒါကတော့ အုန်းပင်/ငှက်ပျောပင်လေးများရှိတဲ့နေရာ ၊ ရန်ကုန်ကသွားရင် ၃ နာရီ ခွဲလောက်တော့ မောင်းရတယ်။
ခရီးသွားဖြစ်တော့လည်း ထူးဆန်းတာ၊ နှစ်သက်စရာလေးတွေတွေ့ရင် ရွာသူားတွေကိုတော့ သတိရသား။ ဒါကြောင့် ဓာတ်ပုံလေးတွေ တမင်တကာ ရိုက်ဖြစ်တာ၊ နေရာလေးကမဆိုးပါဘူး၊ အိမ်သာလည်းသန့်ပါတယ်။ အိမ်သာပုံတောင် ရိုက်လာသေးတယ်၊ မတင်တော့ပါဘူး။ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ။
ငှက်ပျောသီးပင်ကိုတော့ သဘောကျတယ် ဝယ်စိုက်ချင်စိတ်တောင် ပေါက်မိတယ်။
ငှက်ပျောသီး အသီးသီးရင် တရွာလုံး လူတိုင်းစိ ငှက်ပျောသီးတော့ ကျွေးလို့ ရမယ်။
အပင်ဈေးက အမြင်မကြည်လို့ ၅သောင်းလား ၅ထောင်လားတော့ မသိဘူး။
ဒါနဲ့ အုန်းသီးချို ဆိုတာကလည်း ၂သောင်းတောင် ဆိုတော့ ဈေးကြီးလိုက်တာ။
ဒီလိုငှက်ပျောပင် တစ်ခါမှ မျက်မြင် မတွေ့ဖူးဘူးဗျ
ငှက်ပျောပင်စိုက်ပြီး ငှက်ပျောသီးရောင်းစားရင်တောင် ကောင်းမလားမသိဘူး
သူကြီးနဲ့ချိတ်ပြီး မန်ဘာဝင်တိုင်း ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးမယူမနေရ ရောင်းရင်ကောင်းမလား ဒါမှမဟုတ် ……………
ငှက်ပျောသီးနဲ့ ပွိုင့် အလိုက်ပေး လဲ ချင်လို့လား..
ဒါမျိုးဆို စိန်မျောက်မျောက် သိပ်ကြိုက်တယ်။
အရင်တုန်းကတော့ ခြံထဲမှာ ဝက်မလွတ်အုန်းပင်တပင်ရှိတယ်။
ဝက်မလွတ်က ဒေသအခေါ်ပါ။ငှက်ပျောပင်ကတော့ ခုမှဘဲမြင်ဖူး
အဖီးတစ်ရာ ငှက်ပျောပင်ကိုတော့ ကျုပ်လည်း အခုမှ မြင်ဖူးတယ်ဗျ …
အနီးကပ် ပုံကြီးမြင်ရတော့ ရင်ထဲက ကလိကလိနဲ့ …
ပုံတွေအတွက် ကျေးကျေးပါလို့ …..
ငှက်ပျောပင်ပေါက်ဈေးနှုံးက ၁၅၀၀ဝိ/-ပါ၊ ရှားပါးမျိုးဆိုတော့ တန်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဆီရောက်ရင်လဲ ပွါးလာမှာဆိုတော့။ ပြန်ရောင်းရင်လဲကျေမှာပါ။ ငှက်ပျောသီးလဲအဝစားရမှာ။
ဝယ်လာဖို့တော့ မေ့သွားတယ်ဗျ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်နေတာနဲ့။
* အစေ့မပါ ထောပတ်သီးအနံ့ရှိပြီး အရသာချိုမွှေး၏။
* အသီးအခိုင်အရှည် (၈)ပေအထိ အဖီးတစ်ရာကျော်အောင် သီးနိုင်ပါသည်။
* အာဟာရသိဒ္ဒိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟု အဆိုစကားရှိပါသည်။ ၁၅၀၀ဝိ/-
(အောက်က ဓ- လက်ကွက်မသိလို့ သိဒ်ဓိ မှာ ဒ နှစ်လုံးဆင့်လိုက်ပါသည်။)
စကားမစပ် အဲဒီ ငှက်ပျောသီး မျိုး စားဖူးပါလား..
သူရေးထားတဲ့ အညွန်းအတိုင်း ပြောတာလား..
တော်ကြာ အသီးများတော့ အဟာရ မျှ ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ဖွယ်တယ်တယ် ဖြစ်နေမှာလည်း စိုးရသေးတယ်။
ငှက်ပျောအုန်းအပင်တော့မြင်ဖူးတယ်အထပ်တရာငှက်ပျောပင်တော့မမြင်ဖူးဘူး ခုလိုကြည့်ခွင့် သိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို
ကျေးဇူးဘဲ kyawmonkhant ရေ…..
ကိုကျော်မွန်ခန် ့ပြပေးတဲ့ အုန်းမျိုး ငှက်ပျော မျိုးတွေ ဝယ်စိုက်ပြီး ၊ အုန်းငှက်ပျော ပွဲရုံ ထောင်ချင်မိသဗျာ ။
ကျုပ်တို ့မြန်မာနိုင်ငံ က လူအများစု(အထူးသဖြင့်မိန်းမ) ဟာ အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲ အမြဲလို ဝယ်ကြတာကလား ။
အုန်းပွဲ ငှက်ပျောပွဲ ထိုးဘို့ အဆင်ပြေတယ်နော..
အုန်းသီးငှက်ပျော အသီးစုံရင် သာသနာ ထောင့်ငါးရာ ပွဲ ကတော့
ဒီလိုငှက်ပျောပင် ဂျာနယ်တစ်ခုထဲမှာ အထူးအဆန်းအနေနဲ့ ဖော်ပြတာတွေ့ဖူးပါတယ်။
ကြက်သွန်ပန်းဆိုတာ Lavendar လို့ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်၊အရွက်ချေလိုက်ရင် ကြက်သွန်နံ့လိုပဲအနံ့ရပါတယ်။
အပွင့်က ခရမ်းရောင်၊လမ်းမတော် ဆေးကျောင်း ပေါ်တီကိုမှာ ရှိခဲ့တယ်။အခုတော့မသိ။
(မဟာရာဇာ အံစာတုံး says:
ဘာဖစ်လို့လဲတော့သိဘူး … )
နင် ဂလိဂလိ ဖစ်တာ နာတိဒယ်နော် နာတိဒယ်..:D
ငှက်ပျော ပင် ဆိုတာ တစ်ခါသီးပြီး သေရော ဆိုတာ မဟုတ်လို့ ပေါ့နော်။
တစ်ပင် တစ်သောင်းခွဲ၊ အဖီးတစ်ရာ ဆိုတော့ တဖီးကို ၁၅ဝရမှ အရင်းကျေမယ်။
ထပ်သီးမယ် ဆိုရင် ရေရှည် မှာ မြတ်မဲ့ပုံဘဲ၊
ကိုယ့်ဟာကို လမ်းဘေးမှာချရောင်း ရင် ဆိုင်ခန်းခတောင် ပေးစရာမလို။
တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ် ငှက်ပျော ကို မြင်လိုက်ရလို့ မျိုးချစ်စိတ်များ တဖွားဖွား ထလာကာ သူများတွေ ကို ကြွားဖို့ ကူးထား လိုက်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အဲလို အပင် နိမ့်နိမ့် မှာသီး တဲ့ အုန်း ကိုလဲ တခါမှ မမြင်ဘူး လို့ အံ့ဩတကြီး ကြည့်ပြီး အားပေးသွားပါတယ်။
အဲဒါမျိုး အဆန်းလေးတွေ မျှပေးပါဟေ့။ အားပေးနေပါတယ်။
ငှက်ပျောပင် ဓာတ်ပုံ ကို ပြန်ကြည့် မိတော့ အောက်ပိုင်း က အဖီးတွေ က သိတ်မဖွံ့ဘဲ ညှက်နေမလား မသိဘူးနော်။
အပေါ်ကောင် တွေ က အဟာရတွေ ကို နင်းကန်တုတ် နေမှာကိုး။
ငှက်ပျောပင်ဆိုတာ တစ်ခါပဲသီးတာမဟုတ်လား အရီးလတ် …
ကျွန်မလဲ အမှတ်တွေများ မှားနေလားတော့မသိဘူး …
ဟုတ်တယ် မဝေ ငှက်ပျောက တစ်သီးစားပြီးရင် တစ်ပင်ချန်ပြီး ပြန်ခုတ်ရတာပါ။ ဆူးပြောသလို ပဲ အသီးသီးပြီးရင် နောက်တခါ သီးနိုင်ဖို့ ခုတ်ပစ်ရတာပါ။ အောက်ခြေမှာ အပင်ငယ်လေးတွေ ပြန်ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။
စီးပွားဖြစ်စိုက်မယ် ဆို ကျန်ပါတယ်။ သို့သော် ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်ရင် လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်တတ်တဲ့သူနဲ့ သေချာလေး ဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။(ဥတုကလည်း သိပ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ပေါ့)
ခုပြောတဲ့ အဖီးတရာကတော့ စီးပွားဖြစ်တော့ မပြောတတ်ဖူး။ ခုမှ မြင်ဖူးတာမို့ပါ။ ခုတ်တဲ့အချိန် အတော်လေး ဂရုစိုက်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ သာမာန် ၈ ဖီးလောက်ပဲ သီးတဲ့ ပုံမှန် အပင်လောက်တော့ အရသာ ကောင်းမယ် မထင်ပါဘူး။ ကျမတို့ အိမ်က ကျောက်ဆည်ဘက်မှာ ငှက်ပျောခြံစိုက်ထားတယ်။ ၂ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ် ။ မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါ။
ငှက်ပျောပင်က အသီးသီးပြီးရင် မခုတ်ပဲ ထားရင်တောင် အားမရှိတော့ပဲ အပင်မသန်တော့ပဲ ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွက် အပင်ခုတ်လိုက်ရင် အပင်ငယ်လေးတွေ ထပ်ထွက်ပြီး တပင်ခုတ်ရင် ၂ပင်ထွက် အဲလို ထွက်ပြီး ပွားတာတယ် ပြောတာပဲ။
အရီးလတ်ရေ. ငှက်ပျောပင်က အသီး သီးပြီးတာနဲ့ တပင်လုံးခုတ်ပြစ်လိုက်တာပါ ။ ဘေးက ငှက်ပျောပင်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ထပ်ပွားတာတွေနဲ့ ကောင်းကောင်း ရေမှန် မြေမှန်နေရင် တစ်ပင်ပြီးတစ်ပင်ပွားနေတာ တော်ရုံနဲ့ မျိုးမပြတ်တော့ပါဘူး ။ သူ့ အပင်လို အဖီးတွေ အများကြီးထွက်မ ထွက်တော့မသိပါ ။
တကယ်မိုက်တယ်ဗျာ.. တိရစာ္ဆန်လေးတွေရောရှိတာလား ရေကူးကန်နဲ. အပင်လေးတွေရောဆိုတော့ တော်တော် အေးချမ်းမှာပဲနော်.. ငှက်ပျောပင် နဲ. အုံးပင်လေး တွေ သဘောကျသား…
အပင်တော့ဝယ်စိုက်ချင်တယ်.. နေအုံး မြေနေရာကောင်းကောင်းကို အင်စတောမန်.နဲ. ဝယ်လို.ရရင် ကိုကျော်မွန်ခံ့ကို ခေါ်ပြီး အပင်ပေါက်သွားဝယ်ကြမယ်
ငှက်ပျောပင်က ဒီတိုင်းပဲလား။ အကုန်တူတူသီးဘူးလား။ နောက်မှ ထွက်လာတာလား အောက်ဆုံးက သေးသေးလေးတွေကလေ… အင်း ဟိုတယ်နာမည်နဲ့ ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဖန်တီးထားတယ်ထင်တယ်နော် အေးချမ်းမယ့်ပုံလေးပဲ။ မျိုးပင်တွေကော ရောင်းလား။ ဈေးကြီးလားဟင်…
ငှက်ပျောပင်နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ဝင်စားကြတာတွေ့ရလို့ ဝမ်းမြောက်ပါတယ်။
မဆူးရေ အဲဒီငှက်ပျောသီးမစားဘူးပါ၊ ဓာတ်ပုံထဲပါတဲ့အတိုင်းရေးတင်လိုက်တာပါ။ အဲဒီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ခြံတာဝန်ရှိသူလားတော့မသိ ကျနော်ဓာတ်ပုံလျှောက်ရိုက်နေတာတွေ့လို့ အုန်းပင်လေးရှိတဲ့နေရာကို ညွှန် ပေးလို့ စကားစပ်ပြီး ငှက်ပျောပင်အကြောင်းမေးကြည့်တော့ တောထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်လို့ပြောပါတယ်။ တောထဲမှာ သူတော်စင်တွေစားကြတာလို့ပြောတယ်ဗျ။ ကြက်သွန်ပန်းကလဲသူကနာမည်ပြောပြလို့ သိခဲ့ရတာပါ။ တခြား သိချင်တာတွေမေးဖို့လုပ်တုန်း အဲဒီက ကောင်မလေးတစ်ယောက်က အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ သူ့ကို ခေါ်သွားလို့ မမေးလိုက်ရပါဘူး။
ဒေါ်အေးကေကေ ရေ – ဘဲလေးတွေအုန်းပင်နား အစာစားနေတာတွေ့လိုက်လို့ ဘဲမလွတ်လို့တင်လိုက်တာပါ။
ကိုရင်မောင်ရေ ကိုယ်တိုင်စိုက်ကြည့်ဗျာ။ ကိုပေ မီလျံ ဘစ်ဇနက်ဗျ။ နွေဦး-တပင်စီစိုက်ရင်ကိုလုံလောက်မယ်ထင်တယ်နော်။
ဒေါ်ကြာရေ ရန်ကုန်မှာရှိမရှိတော့မသိဘူး၊ ကျိုက်ထိုနားက စိမ်းလဲ့တင်မျာရှိတာတော့ အသေအချာဘဲ။ ငပွကြီးက သူများစိတ်ကိုသိပုံရတယ်နော်။
အရီးလတ်ရေ ငှက်ပျောပင်က တခါသီးတာဘဲ တွေ့ဘူးပါတယ်။ အသီးရင့်တာနဲ့ အပင်ပါခုတ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောပင် ပွါးလွယ်ပါတယ်။ ဝါးလိုဘဲ ဘေးကနေအပင်သားလေးတွေထွက်ပါတယ်။ အဲဒီအပင်လေးတွေကို ခွဲစိုက်ရပါတယ်။
ရှုင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ကိုထူးဆန်း၊ ရွှေတိုက်စိုးရေ နေရာလေးက အေးချမ်းပါတယ်။ ဆင်တွေ၊ ကျားသစ်တွေ၊ မျောက်တွေလဲရှိပါတယ်။ သွားရတာလဲလွယ်ပါတယ် နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရပါတယ်။ သွားမယ်ဆိုခေါ်လိုက်ပါလိုက်ပို့ပါမယ်။မာ်လမြိုင်လမ်းက နိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းထား ကောင်းမှကောင်းဗျ။ မနောဖြူရေ ငှက်ပျောပင်ကဒီအတိုင်းပေါ့ဗျ၊ ငှက်ပျောဖူး အပေါ်ဆုံးက အခွံကအရင်ကွာတာဆိုတော့ အပေါ်ကအသီးက ကြီးပါတယ်။ အစဉ်လိုက်အောက်တိုင်သွားတာပါ တပြိုက်နက်မထွက်ပါဘူး။ ပျိုးပင်တွေရောင်းပါတယ်။ ဈေးကတော့ ကျနော်မဆုံးဖြတ်တတ်ပါ။ မတင်ရသေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရှိပါသေးတယ်။ ထူးဆန်းတာကို အရင်တင်လိုက်တာပါ။ ကျိုက်ထီးရိုးသွားရင် ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကံကောင်းရင် အဖီးတစ်ရာငှက်ပျောတောင် စားချင်စားရမှာဗျ။ အခုတော့ မမှည့် သေးဘူး။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။